Tilmaamaha Isticmaalka Tijaabada ee CCRP: Deeqaha
Ku soo dhowoow Barnaamijka Cilmi Baarista Xoolaha ee Iskaashatada McKnight Foundation (CCRP) ee bogga macaashka ee muuqaalka. Fadlan ogsoonow: khayraadkani waxay gaar u yihiin isticmaalka Kooxda Hoggaanka CCRP waxaana kaliya oo lagu heli karaa iyada oo loo marayo URLkan gaarka ah. Sidan oo kale, fadlan ha la wadaagin ama u qaybin xidhiidhkan iyada oo aan fasax laga helin Hay'adda McKnight Foundation.
Mission, Vision iyo Tag: Aragtidayada ansaxsan, hadallada iyo qoraalka tagistu waa waxyaabaha muhiimka ah ee aqoonsiga calaamadda CCRP waana in laga tagaa si aan sax aheyn oo aan loo baahnayn dhammaan isgaarsiinta.
Ereyga: Isticmaalka la aqbali karo ee loogu talagalay jadwalka CCRP waxaa lagu qeexay hagid adeegsigeena dhammeystiran oo waa in aan ku sii jirnaa dhamaan fursadaha isgaarsiinta, oo ay ku jiraan daabacaadda, bogga, dibadda, calaamadaha iyo dharka.
Midab: Qalabka midabka ee CCRP wuxuu ku salaysan yahay midabada la ansixiyey ee McKnight Foundation waxaana loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dareenka iskaashiga caalamiga ah. Midabka asaasiga ah ee loogu talagalay ereyga waa Pantone 146, halka midabada dheeraadka ah loogu talagalay in lagu taageero oo la buuxiyo midabka asaasiga ah.
Naqshadaha: Nidaam gaar ah, dheeman qaabeed waa qaab dhismeedka aasaasiga ah ee CCRP aqoonsiga muuqaalka. Midabada firfircoon ee ka mid ah palette casriga labaad ayaa xoojiya jilaankan, qaabka halabuurka ah, oo ka tarjumaya nooca iskaashiga ah ee shaqadayada.
Su'aalo? Fadlan la soo xiriir Kelsey Johnson wixii su'aal ah ee la xidhiidha tilmaamaha calaamadaha CCRP.
Tilmaamaha nooca CCRP